AKHRISO: Qorshe Qowmiyadda Tigree-gu Kaga Go'ayso Itoobiya Oo Bannaanka Yimid Iyo Wargeys Iftiimiyey Xogo La Qarinayey - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAKHRISO: Qorshe Qowmiyadda Tigree-gu Kaga Go’ayso Itoobiya Oo Bannaanka Yimid Iyo Wargeys Iftiimiyey Xogo La Qarinayey
AKHRISO: Qorshe Qowmiyadda Tigree-gu Kaga Go’ayso Itoobiya Oo Bannaanka Yimid Iyo Wargeys Iftiimiyey Xogo La Qarinayey
Qoraal lagu daabacay wargeyska afka xisbiga Tigreega ku hadlo ee ‘Wayin’ ayaa deegaanka Tigreega ku tilmaamay inuu dal oo kale yahay (Defacto State), qoraalkaasi oo lagu tilmaamay inuu yahay mid sii kala fogeynayo khilaafka bariyahanba u dhaxeeyey EPRDF iyo TPLF.
Haddaba iyada oo wargeyska qoraalka uu daabacay laga duulaya ayaa waxaa dalka Itoobiya si weyn looga hadal hayaa deegaanka Tigreega inuu doonayo inuu ‘ka go’o dalka Itoobiya intiisa kale.
Makonnin Fiseha oo jaamacadda Maqale ka dhiga culuunta sharciga oo ka hadlay qoraalka wargeyska ayaa sheegay “wargeyska waxaa iska leh xisbiga TPLF waxaana lagu soo saaraa mowqifka siyaasadeed ee xisbigaasi marka qoraalkaasisawirka uu bixinayo kama sii horshacayo, laakiin waxaan sheegi karaa iney arrinin jirto.”
Qoraalkana inta aan wargeyska ‘Wayin’ lagu soo daabcin ka horna waxaa hadalkaasi marar badan laga maqlayey dadka deegaankaasi u ololeeya, aqoonyahannada deegaanka deegaanka oo dareen noocaasi muujinayey.
Waxayna shacabka dalkaasi isweydiinayaan su’aalo ay ka mid yihiin xisbiga tigreega ee TPLF ma ka bixi doonaa EPRDF? Haddii ay EPRDF iyo TPLF ay kala tagaan maxaa ka dhalan kara?
Xisbiyada urur weynaha EPRDF ka tirsan ee taageeraya midnimadiisa iyo xisbiyada horay bahwadaagta la ahaa haddana xisbigaasi ku biiraya waxay aminsan yihiin inuu xisbiga TPLF sidi hore uu wax ku soo wadi jiray haddii uu doonaya ay wax badan u suuragaleyn.
Kulanki uu Axaddi si gaar ah uu Ra’usl Wasaare Dr Abiy Axmed ula yeeshay guddiga fulinta TPLF ee natiijada la’aanta ku soo dhammaaday ayaa la sheegay iney arrintan astaan u tahay.
Billowga midnimada Xisbiga
Arrinta mideynta xisbiga EPRDF oo ahayd mid bilooyin la hadal hayey ayaa waxaa lagu wadaa inuu xisbiga la midoobo xisbiyada 5-ta oo bahwadaagta la ahaa sida Soomaalida, Cafarta, Gaambeella, Benishaangul iyo Hararida, waxayna arrintan guddiga fulintu shegeen inay go’aan ka gaareen maalinti shalay.
Xisbiga EPRDF oo dalka Itoobiya ka soo arriminayey ku dhawaad 30 sano waxaa ku mideysnaa oo keli ah xisbiyo ka soo jeeda qowmiyadaha Oromada, Amxaarada, Tigreega iyo Shucuubta Koonfureed. Waxaana sanada badan la isweydiinayey xilliga uu xisbiga qowmiyada kooban ka gudbayo una gudbayo xisbi heer qaran.
Xisbiga haddii uu midoobana wuxuu la bixi doonaa EPP, guddiga fulintana wuxuu si qoto dheer uu uga dooday barnaamijaka qabyada ah ee mideynta xisbiga.
Haddaba mideynta Xisbiga muxuu la imanayaa?
Mr Faqadu Tesema oo go’aanka guddiga fulinta xisbiga uu arrintan ka gaaray kala hadlay warbaahinta dalka Itoobiya wuxuu sheegay in shirka looga dooday nidaamka federaalka ee hadda jira, afafka, caddaaladda iyo jiritaanka qaran, wakaalasho caddaalad ku saleysan iyo arrima kale.
Xisbiga cusub ee la damcsan yahay ee heer qaranna waxaa gundhig u noqonaya shan qodob:
Si nidaam federaal ah oo dimuqraadiyad ku dhisan qowmiyadaha dalka oo dhan ay iska dhex arkaan loo xoojin lahaa in barnaamijka iyo xeerarka xisbiga lagu soo daro.
Xuquuqda dastuuriga ah ee ay qowmiyadaha dalka u leeyihiin iney ismaamulaan ilaa iyo aaya ka tashi in la dhowro.
Xisbiga in si caddaalad ah looga qayb geliyo xisbiyada bahwadaagta la ahaa xisbiga iyo qowmiyadaha dalka oo dhan si ay xisbiga isaga dhex arkaan.
Siyaasadda dalka in lagu hoggaamiyo sii xoojinta jiritaanka qowmiyadaha iyo midnimada umadda.
In la ictiraafo afafka badan isla-markaana xisbiga uu aqoonsado afaf kale oo dalka looga shaqeyn karo.
Go’aanka xiga yaa laga sugayaa?
Go’aanka uu arintan ka gaaray guddiga fulinta xisbiga EPRDF ma aha mid halkaa ku istaagaya. Balse, waxaa lagu soo bandhigayaa shirweynaha xisbiga uu labadi sanaba mar yeesho. Go’aanka kama dambeysta ee xisbiga uu ku dhaqmana waxaa iska leh oo soo saaraya golaha dhexe ee xisbiga oo ka kooban 180 xubnood oo ka kala imanaya afarta urur uu xisbigu ka kooban yahay.
Kaddibna go’aankaasi waxaa loo sii gudbinayaa golaha guud ee xisbiga oo ay tiradiisu aadka u badan tahay halkaasi ayaana lagu soo afmeerayaa goaa’nka midnimada xisbiga oo lagu ogaanayaa go’aanka inuu meel marayo in kale.
Somaliya Oo Shaacisay Sababta Dhabta Ah Ee Ay U Joojisay Muxaadaradii Sheekh Umal
Qoyskii Ay Ka Baxday Gabadhii Muqdisho Lagu Dilay Ee Almaas Elman Oo Hadal Qiiro Leh Soo Saaray